Qeylo dhaan laga keenay dil arxan darro ah oo ay ciidanka AMISOM ka geysteen degmada Baraawe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qeylo dhaan laga keenay dil arxan darro ah oo ay ciidanka AMISOM ka geysteen degmada Baraawe
Waxaa soo baxaaya eedeymo loo jeedinaayo ciidamada ka tirsan AMISOM ee ku sugan gobolka Sh/hoose, kuwaas oo lagu eedeeyay inay degmada Baraawe fal dil ah ka geysteen.
Qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Baraawe oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay maalintii shalay degaanka Wareer-male oo ka tirsan degmada Baraawe ku dileen labo wiil oo dhalinyaro ah, kuwaasoo ahaa qowsaaro Geel la joogay.
Cutubyo ka tirsan ciidamada AMISOM ee falka dilka ah u geystay dhalinyaradaasi ayaa la sheegayaa inay xilligaasi kusii jeedeen degmada Baraawe, waxaana la sheegay inay ka shakiyeen sidaasna ay ku toogteen.
Waxaa dhalinyarada la dilay magacyadooda lagu sheegay lagu sheegay C/raxmaan Xasan oo 17 sano jir ah iyo Cabdi Xasan oo 15 jir ahaa.
Dhinaca kale, ehelka labadaasi wiil ee la dilay ayaa ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya in arrintan ay wax ka qabato islamarkaana ciidanka AMISOM ee falkaasi dilka ah geystay lagula xisaabtamo.
Si kastaba ha ahaatee, ciidamada AMISOM ayaa inta badan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Sh/hoose ka geysta dilalka ugu badan ee dadka shacabka ah, waxaana dilkiii ugu dambeeyay ay gobolkaasi ka geysteen uu ahaa gaari BL ah oo qori baasuuke ah ay ku dhufteen xilli uu maraayay duuleedka degmada Qoryooley, halkaas oo ay ku dhinteen illaa 6 ruux oo la sheegay inay ganacsato ahaayeen.